rehetra mahalala izay maimaim-poana amin'ny aterineto RPG lalao. Ry olo-maherin'ny ny hetsika ho amin'ny paritra, mitsambikina avy amin'ny sehatra, niakatra ny tady sy ny voaloboka, mandeha lavidavitra eny hatrany zavatra mba hanangona, handrava, mahazo, kapoka. Ny asa dia afaka ny ho any, satria ny lalao mba ho any amin'ny tsy ampoizina indrindra teti-dratsin'ny. Tsy azo atao mihitsy traikefa nahafinaritra – mahafinaritra, mampihomehy, mampidi-doza, feno zava-nitranga. Ho an'ny ankizilahy io tantara io amin'ny mpitifitra sy ny ady, ary ny ankizivavy no tia mifanerasera amin'ny biby, matoatoa, andriambavy, mermaids. Dia hamangy an-tampon-tendrombohitra, midina ho any amin'ny ranomasina tany, ny sasany manidina eny amin'ny lanitra.
Lalao Action Games tamin'ny Category:
Miadia amin'ny Multiplayer 3D Pixel Strike Multiplayer
Lalao Online Adventure Games
amin'ny RPG ny lalao nilalao ny tena mpilalao
Misy aleony hiantso ny taloha RPG lany lalao platformer, fa foto-kevitra io dia tsy azo ampiharina amin'ny rehetra tsy misy fanavahana vokatra. Adventure manana saha midadasika kokoa ny asa, satria ny endri-tsoratra foana tsy mihetsika amin'ny toerana samy hafa hita amin'ny ambaratonga.
Action Games Online - Tsy azo atao mihitsy traikefa nahafinaritra. Manana toeram-miafina, vazivazy, fety, Fantasy, tsy mahazatra fihaonana, dia lavitra. Ho azo antoka fa mahatsiaro ho toy ny mpitsongo, satria tantara rehetra dia manana fikatsahana ny mahita zavatra na Output. Ianao mitsidika amin'ny toe-javatra tafahoatra, ny mahita ny bibidia ala sy ny tanàna simba fahiny, dia tsidiho ny firenena samy hafa, ianareo dia hahita na dia ny zava-miafina tontolo izao voarindra sy ny. Dia hihaona tsy mampino sy mahafinaritra, ary mampidi-doza niaraka toe-javatra. Amin'ny alehanao ianao no hitsangana zombies sy werewolves, biby goavam-be avy lavitra planeta sy ny tsy misy indrafo milina, fa mba hiatrika azy ireo dia hanampy Super Mario, Sonic ny sokina, boky tantara an-tsary Naruto mahery fo.
ny ankizilahy tia milalao RPG lalao amin'ny singa ny ady, ary shooter izay tsy maintsy hiady amin'ny fahavalo maro, jereo ny bala sy ny fahasalamana Packs. Ny faritra sarotra indraindray ka izay mitovy Misafotofoto, fa tsy ho very, tsarovy ampahany tamin'ny famantarana marika - foto-kevitra izay no ao. Girls fialam-boly mandany fotoana, teo amin'ny antokon'i Monster Avo, Lisa Simpson, saka fanampiana Garfield hivadi-po ireo ao amin'ny maizina trano-maizina, dia ho anjara amin'ny handrahoana sakafo sy handeha ho lamaody miantsena.
Tantara boky tantara an-tsary sy ny siansa tantara noforonina manao ny gameplay fahafinaretana be koa. Miaraka amin'ny mahery fo ny "Ny Tompo ny Rings" ianao, dia hitsidika ny lair ny Troll, hisakafo ao amin'ny tranombahiny antitra, mahita fahiny rakitry ny ela sy mampihatra ody. Miaraka Cactus McCoy fatra-pitady izany ny elixir mba ho tonga olona indray. Bob sponjy afa-tsy ny tanàna hametraka ny tsehatra lalao, Mankalaza Halloween, dia manala potipoti-javatra avy amin'ny ranomasina.
Ny tena hetsika gameplay
Action lalao rehetra na manana ny toetra, fa miorina amin'ny fitsipika mitovy, ary tsy maintsy:
no mahatonga ny periphery
Search ho zavatra ka hitondra azy amin'ny
ny mahita fampiasana ho azy ireo
Ny sasany dia mitambatra ny tsipiriany hamokatra endrika vaovao
mifandray amin'ny endri-tsoratra hafa
Ny fanoratana teny lalao hevitra, manatanteraka ny fepetra
Toa mazava ny zava-drehetra ny asa. Fa tokony homarihina fa toy ny fampiroboroboana dia hahazo sarotra. Mifidy ny ambaratonga am-piandohana, misafidy mora - ho mpanao voalohany, mba hahazoana ny tsy manam-petra ny fotoana eo amin'ny toe-javatra. Misy ihany koa ny eo ho eo sy ny avo indrindra, izay omena afa-tsy minitra vitsy izany, ary tsy misy fanazavana na voafetra havaozina tsikelikely isaky ny dingana.
Adventure lalao ho an'ny sokajin-taona rehetra
Efa ela no nahita fa malalaka ny hilalao lalao RPG toy ny olon-dehibe na dia mpilalao. Mahatsapa izy ireo Tahaka ny ankizy madinika indray ka nandroaka ny vampira mitady ny famonjena avy amin'ny efitra mba haneho ny tenany nandritry ny ady, ny holatra Fanjakana mandehandeha miaraka ny rahalahiny Luigi sy Super Mario. Fa rehefa misy ny rehetra izao pastimes mpandraharaha manolotra sy ireo izay natao ho an'ny iray taona. Ohatra, ny ankizy hankafy fanabeazana Action Masha sy Diego, mampihomehy Adventures ny alika kely Volta, Tom sy Jerry, Winx matoatoa, sambatra gidro, mahafatifaty mpanara.
Fa ny be herim-po sy liana mpilalao isika mahaliana soso-kevitra: hamangy ny lahatsoratra-Tranga tontolo izao avy amin'ny tantaran'ny "ny traikefa nahafinaritra" ao amin'ny orinasa Fina sy Jake mandeha amin'ny Masyanya manampy ny fianakaviana ny Simpsons ka midina ho any amin'ny helo miaraka Jaco.